जब महिलाको पेटमा यस्तो देखेर डाक्टर नै झस्किए
२०७५ कार्तिक ३० शुक्रबार, काठमाडौं । सामान्यतया पेट नदुख्ने मानिस कमै हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको त पेट प्राकृतिक रुपले पनि दुख्ने नै भयो । तर क्यामरुनकी एक २६ वर्षे महिलाको पेट दुखेपछि जब अस्पताल गइन् तब डाक्टर नै हैरान भए । ... बाँकी अंश»
मनै लोभ्याउने अनौठा होटलहरु
२०७५ कार्तिक ३० शुक्रबार, काठमाडौं । तपाईले देश विदेशमा विभिन्न शानदार होटलको बारेमा सुन्नु भएको होला । कुनै फाइभ स्टार, कुनै सेभेन स्टार, कुनै आफैमा भव्यताले चर्चीत होटल । तर के तपाईले विश्वका अनौठा होटलका बारेमा सुन्नु भएको छ ? जुन प्रकंतीको काखमा रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक ३० शुक्रबार, काठमाडौं । हामी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँले आलु किन्नलाई पनि मोल-तोल गर्दै आर्को पसल पग्छौ । तर एक व्यक्तिले एक- दुई रुपैयाँ हैन सात करोड दिएर एक दाना आलु किनेका छन् । ... बाँकी अंश»
नर्कभन्दा कम छैन महिलाको लागि यो मुलुक
२०७५ कार्तिक २९ बिहिबार, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको उत्तरमा रहेको पपुवा न्युगिनी महिलाहरुको लागि निकै खतरानक मुलुक मानिने गरिएको छ । एक अनुमानका अनुसन्धानका अनुसार यो मुलुकमा ७० प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नो जीवनकालमा बलात्कारको सामना गर्ने गरेका छन् । पपुवा न्युगिनीमा महिलामाथिको हिंसालाई मानिसहरुले पनि सही मान्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
कहाँबाट सुरु भयो स्याम्पुको प्रयोग
२०७५ कार्तिक २९ बिहिबार, काठमाडौं । नुहाउँदा धेरैजसोले स्याम्पुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यद्यपि स्याम्पुको विषयमा धने धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । स्याम्पु भन्ने शब्द झट्ट सुन्दा विदेशी शब्दजस्तो लाग्छ तर वास्तवमा यो संस्कृत शब्दबाट आएको शब्द हो । स्याम्पु चम्पुशब्दबाट बनेको हो । यसको अर्थ मसाज गर्नु भन्ने हुन्छ ... बाँकी अंश»
कुमार केटाको अभाव भएको देश, विवाह गर्न वरको खोजीमा हजारौ युवती
२०७५ कार्तिक २९ बिहिबार, काठमाडौं । प्रत्येक केटीको युवावस्थामा विवाह गर्ने सपना हुन्छ । विवाह धूमधामले होस् उसको चहानना हुन्छ । तर, यस्तो एक ठाँउ रहेको छ जहाँ महिलाले विवाह गर्न निकै कठिन भएको छ । सो ठाँउमा सुन्दर महिलाहरुले पनि कुमार केटा पाउन सकेका छैनन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक २८ बुधबार, काठमाडौं । इन्डोनेशियाको जावामा सोलो नामको एक गाँउ रहेको छ। यहां एक पहाड छ जसको नाम केमुकस पर्वत हो। यो 'सेक्स माउन्टेन' को नामले बदनाम छ। यहाँ विवाहित महिला अज्ञात पुरुषहरुसँग संसर्ग गर्छन् । अचम्मको कुरा त यो छ कि सो बिषयमा कसैलाई समस्या छैन । ... बाँकी अंश»
क्यानडाको यस्तो घटना जहाँ मिस युनिभर्स प्रतियोगी महिला, पुरुष बनिन्
२०७५ कार्तिक २७ मंगलबार, एजेन्सी। सन् २०१२ मा सम्पन्न क्यानडाकी मिस यूनिवर्स प्रतियोगीतामा सहभागि भएकी एक प्रतियोगीले आफ्नो लिंग परिवर्तन गरेर पुरूष बनेकी थिइन्। मोडल जेन्ना तालाकोवाले आफ्नो लिंग परिवर्तन गरेर पुरुष वनेकी हुन्। लिंग परिर्वतन पछि जेन्नालाई प्रतियोगीताबाट हटाइएको थियो। ... बाँकी अंश»
सामाजिक सञ्जालमा ६० लाखले हेरे गधाको गीत
२०७५ कार्तिक २७ मंगलबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा गधाले गीत गाएको भिडियो भाइरल भएको छ । विदेशी मीडियामा हेरियट नामको गधा निकै भाइरल भएको छ । आयरिश मेन मार्टिन स्टेनटनले फेसबुकमा आयरिश गीत गाउने एक गधाको भिडियो पोस्ट गरे , जसपछि हेरियट नामको गधा सामाजिक सञ्जालमामा भाइरल भयो । ... बाँकी अंश»
आत्मविश्वास कसरी बढाउने ?
२०७५ कार्तिक २७ मंगलबार, काठमाडौं । मानिसहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । सबैको स्वभाव एकै किसिमको हुँदैन । केही मानिसहरु क्षमता हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासको कमीको कारण क्षमताअनुसारको पदमा पुग्न सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तोमा मानिसहरुलाई आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि निम्न उपायहरु महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । ... बाँकी अंश»
६० लाखभन्दा बढिले हेरे सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको गधाको गीत
किशोर किशोरीको प्रेमको म्याद १४ महिना मात्रै : सर्वेक्षण
२०७५ कार्तिक २४ शनिबार, काठमाडौँ। नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षणले किशोर किशोरीले गर्ने प्रेम केवल १४ महिनामै अन्त्य हुने गरेको देखाएको छ । किशोर किशोरीले प्रेम मनोरञ्जनका लागि गरेको तर किशोर किशोरीहरु प्रेम विवाहमै आकर्षित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रेम विवाहमा ७२ र मागी विवाहमा ५३ प्रतिशत आकर्षित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ... बाँकी अंश»
दालचिनि-जैतुन एक फाइदा अनेक
२०७५ कार्तिक २४ शनिबार, एजेन्सी । दालचिनि र जैतुनका धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । त्यस मध्ये एक शीध्रपतनको औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । शीध्रपतनले धेरैको दाम्पत्य जिवनमा दरार ल्याउका साथै सम्भोगको चरम सुखबाट बन्चित गर्दछ । बजारमा शिध्रपतन हटाउने बिभिन्न औषधिहरु पाइन्छ तर मुल्य र प्रयोगले पनि यो समस्या हटाउन सहज हुदैन । ... बाँकी अंश»
पुरुषलाई निषेध गरिएको मन्दिर
२०७५ कार्तिक २४ शनिबार, काठमाडौं । राजस्थानको अजमेर शहरदेखि १४ किलोमीटर उत्तर- पश्चिममा अरावली पहाडको फेदिमा 'पुष्कर' नामको शहर रहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक २३ शुक्रबार, नयाँ दिल्ली । भारत एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ भगवानको रुपमा धेरै महिला शक्तिलाई पूजा गरिन्छ । तर, त्यहाँ व्यवहारमा भने महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । भारतमा उग्र पितृसत्तात्मक शासन रहेको छ भनेर भन्ने गरिन्छ । भारतमा धेरै महिलाहरु पुरुषसँग आँखा जुधारएर हेर्न सकेत सक्ने अवस्था रहेको छैनन् । भारतमा २० प्रतिशत भन्दा कम महिला मात्र कामको सिलसिलामा घर बाहिर जाने गरेका छन् । तर, भारतमा रहेको धेरै मन्दिरहरु भने देवताको भन्दा देवीको ने बढी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
दुवै हात प्रत्यारोपण गरिएकाको रहर, फेरि रक्सीको बोतल समात्ने
२०७५ कार्तिक २३ शुक्रबार, काठमाडौं । बेलायतको एक बिरामीको दुवै हात प्रत्यारोपण गरिएको छ उनको रहर छ फेरि बियरको बोतल समाउने र मोटरसाइकल चलाउने । तीन वर्षअघि भयानक दुर्घटनामा परेर दुवै हात गुमाएका ५७ वर्षीय बेलायती नागरिक क्रिस किङ्को दुवै हात प्रत्यारोपण गरिएको थियो । ... बाँकी अंश»
३ पटक संसर्ग गरे दाम्पत्य जीवन सुखी !
२०७५ कार्तिक २२ बिहिबार, एजेन्सी । सुखद दाम्पत्य जीवनमा सेक्स र चुम्बनको अहं योगदान रहन्छ । एक शोधका अनुसार आफ्नो वैवाहिक जीवन सुखी बनाउन चाहने दम्पतीले सातामा कम्तिमा तीन पटक सेक्स गर्नुपर्छ ।करिब ३ हजार विवाहित व्यक्तिहरुमा गरिएको सर्वेक्षणले दाम्पत्य जीवन सुखी बनाउन दिनमा कम्तिामा ४ पटक आफ्नी पत्नी या आफ्नो पतिलाई चुम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ... बाँकी अंश»
स्वीडेनमा १७ औं शताब्दीको दुई मुकुट चोरी, डुङ्गा चढेर भागे चोर
२०७५ कार्तिक २२ बिहिबार, काठमाडौं । स्वीडेनको राजकीय परिवारले लगाउने दुई मुकुटहरु चोरी भएको छ । एक प्रदर्शनीमा राखिएको अवस्थामा उक्त मुकुटहरु चोरी भएको हो । प्रदर्शनीमा निकै ठुलो भीड थियो र सुरक्षा अलार्म पनि बन्द थियो । ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक २२ बिहिबार, एजेन्सी । यौनसम्बन्धी क्रियाकलाप जस्तै पोर्न साइट हेर्ने बानी भएका व्यक्तिलाई चेन स्मोकरलाई जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन जारी रहेको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले पोर्न भिडियो हेरि रहने १९ जना मानिसको दिमागको अध्ययन गरेका छन्। यौनको लत भएका व्यक्ति र लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको दिमागमा उल्लेखनीय समानता पाइएको छ। यी दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धबारे पहिलो अध्ययन भएको हो । ... बाँकी अंश»
पुरूष र महिलाहरू संसर्गमा के खोज्छन् त !
२०७५ कार्तिक २१ बुधबार, एजेन्सी। शोधकर्ताका अनुसार १० पुरुषमध्ये एकजनाले आफ्नो जीवन संगीनी पाउनुभन्दा अघि ११ जना महिलाहरुसँग यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न चाहन्छन्। ... बाँकी अंश»